iDiscover က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ခရီးသြားလမ္းၫႊန္ စတင္ျဖန႔္ခ်ိ
Photo - iDiscover
မြန်မာခရီးသွားများ မှတ်တမ်းတင်လောက်သော ရန်ကုန်မြို့ ကို တစ်မူထူးခြားစွာ သွားလာလည်ပတ်နိုင်ရေး အတွက် မြို့ပတ်ရထားစီးခရီးသွားလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး လမ်းညွှန်မြေပံုသစ်ကို မိတ်ဆက်၍ စတင်ဖြန့်ချိမည် ဖြစ်ကြောင်း လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတစ်ခုက သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်�
“ရန်ကုန်ကို မြို့ပတ်ရထားစီးပြီး လည်ပတ်သွားလာတာဟာ ခရီးသွားတွေအဖို့ မဖြစ်မနေ ရယူရမယ့် အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်လာတာကြောင့်ရယ်၊ ခရီးသွာလာရေးရာသီ အချိန်အခါအရ တောင်းဆိုချက်နဲ့အညီဖြစ်နေရတာ ကြောင့်ရယ်ပေါ့၊ ဒီလမ်းညွှန်ကို စီစဉ် ထုတ်ဝေလိုက်ရတာပါ�
��” ဟု ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် အဆိုပါလုပ်ငန်း၏ တီထွင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သော iDiscover က ယင်းကဲ့သို့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းဖြစ်သည်။
“ရန်ကုန်မြို့ဟာ ဘာလဲဆိုတာကို ပကတိအတိုင်း တွေ့မြင် သိရှိလိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုဟာ တိုးပွားလာနေတယ်။ ဒါကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ ဒီလမ်းညွှန်မြေပုံနဲ့တကွ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ကနေလည်း သွားလိုရာကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကိုပါ တွဲပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ခရီးသွားလမ်းညွှန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ရန်ကုန်ကို ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတစ်ယောက်ရဲ့ တွေ့ကြုံခံစားရပုံမျိုး မဟုတ်ပဲ၊ ဒေသခံခရီးသွား တစ်ယောက်လို သိရှိ ခံစားလိုတဲ့ ခရီးသွားအရေအတွက်က များသည်ထက် များလာနေပါတယ်။” ဟု iDiscover ကို တည်ထောင်သူ Ester van Steekelenburg ကပြောပါသည်။
“အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နေရာဒေသအလိုက် လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ ရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို မိတ်ဆွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေလို သဘောထားပြီး အားပေးကူညီလိုတယ်၊ ပံ့ပိုးပေးချင်တယ်။ ရည်ရွယ်တာက သူတို့တတွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသွင်မတူ ထူးခြားချက်ရှိနေတာဟာ သွားရောက် လည်ပတ်ရမယ့် နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြသနိုင်ဖို့ပါပဲ။ ” ဟု ယင်းလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူကပြောပါသည်။
“ပြီးတော့ကာ ခေတ်မီနည်းပညာနဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သူတို့ဝန်းကျင် အကြောင်းကို ဧည့်ပရိတ်သတ် အသစ်တွေနဲ့ မျှဝေခံစားနိုင်ဖို့ပါ။”
iDiscover ထုတ်ပြန်ချက်မှာ အကြံပြုထားသည်များ တွေ့ရပါ၏။ သွားလာ လည်ပတ်သင့်တဲ့ ဝန်းကျင် ခြောက်ခုနှင့် ခရီးတစ်ထောက်နားရင်း စားသောက်စရာရနိုင်ရာ၊ ဈေးဝယ်ထွက်နိုင်ရာ၊ သို့မဟုတ် ကစားခုန်စားနိုင်ရာ နေရာ စုစုပေါင်း ၅၀ ရှိကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
ဝန်းကျင် ခြောက်ခုဆိုသည်မှာ စိတ်ဝင်စားဘွယ်အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ (၁) ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်ကျင်လည်ရာ အလုံ၊ (၂) ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် ဓလေ့ထုံးစံဖြင့် နေထိုင်တတ်သူများရှိရာ ကြည့်မြင်တိုင်၊ (၃) လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ကျောင်းသူကျောင်းသားမြို့တော် လှည်းတန်း၊ (၄) သမိုင်းဝင် အင်းစိန် ထောင်ဝိုင်း၊ (၅) ရွှေဘုရားရှိရာ တံတားကလေး ဈေးရွာနှင့် (၆) လမ်းဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်မှာ ဈေးသည်တို့အပြင် ကစားခုန်စား ပြိုင်ပွဲများဖြင့် စည်ကားနေတတ်သည့် မလွှကုန်းတို့ဖြစ်သည်။
ရထားလမ်းကျောနှင့် မနီးစပ်ရာ နေရာများရောက်နိုင်ခဲ့ရင်ဖြင့် ခရီးသွား တစ်ယောက်အဖို့ ရန်ကုန်မြို့၏ နေ့စဉ်ဘဝကို အကျွမ်းတဝင် ဖြစ်သွားရလောက် အောင်တွေ့မြင်လိုက်ရမှာပါ။
“ဝန်းကျင်ဟောင်းတို့ရဲ့ မူရင်း အစစ်အမှန်နဲ့ သူတို့နည်း သူတို့ဟန်နဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပုံတွေကို ဒေသပကတိ အတိုင်းဖေါ်ကျုးရာ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေ၊ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားရာ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို ထောက်ကူ အားပေးဖို့လည်း ကျွန်တော်တို့က ရည်ရွယ်ပါတယ်။” ဟု Ester van Steekelenburg ကပြောသည်။
ခရီးသွားလမ်းညွှန်ပါ လည်ပတ်စရာ ဝန်းကျင်နှင့် နေရာများကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြောင်းကိုလည်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါသေး၏။ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ‘လှတယ်’ အမည်ရှိ လက်မှုထုတ်ကုန် ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်မှ ရှင်းလင်းပြသရေးအဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်ပညာရေး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အစီအစဉ်မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများက ယင်းကဲ့သို့ သင့်ရာနေရာများကို လေ့လာစိစစ်၍ ရွေးချယ်ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သူတို့သည် မြို့ပတ်ရထားကို စီးနင်းလိုက်ပါပြီး၊ လူအများမတွေ့ရှိရသေးသော အမြတ်တနိုး တန်ဘိုးထားစရာ အဖုံဖုံ၊ နေရာဒေသအလိုက် လူတို့နှစ်ချိုက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ နေရာများနှင့် အရောင်အသွေး အမျိုးမျိုးရှိ စရိုက် လက္ခဏာ အစုံစုံတို့ကို ဟောင်ကောင်မှ iDiscover အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှု၊ ပြည်တွင်းရှိ မြို့ပြဆိုင်ရာ လေ့လာ စူးစမ်းသူများဖြစ်ကြသော Sara Candiracci, Anna Livia Cullinan နှင့် ကွယ်လွန်ရှာပြီဖြစ်သော Bon Percival တို့၏ ထိန်းကျောင်း ညွှန်ကြားမှုဖြင့် ရှာဖွေ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။
“ကျွန်တော့် ကျောင်းနေဘက်တွေနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ တစ်ခုသော စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ အဲဒီမြို့ပတ်ရထား ဖြတ်သန်းရာ ဝန်းကျင်တွေကို လမ်းလျှောက် လှည့်လည်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ လေ့လာ ပြုစုခဲ့တာတွေကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာကို မြင်ရတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ iDiscover အဖွဲ့နဲ့ လေ့လာ စူးစမ်းရတာကို ပျော်ရွှင် နှစ်ခြိုက်ရပါတယ်။ ရန်ကုန်က လူသိနည်းတဲ့ ရပ်ဝန်းတွေရဲ့အကြောင်းကို ပိုပြီး နားလည်မိပြန်တယ်။ ” ဟု ရန်ကုန်ပညာရေး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အစီအစဉ်မှ Tim ကပြောသည်။
‘လှတယ်’ လက်မှုထုတ်ကုန် ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ကို တည်ထောင်သူ Ulla ကလည်း “အဲဒီလို ရန်ကုန်မြို့ကို ဖြတ်သန်း လမ်းလျှောက်ပြီး လိုက်လံရှင်းပြရတာရယ်၊ iDiscover အလုပ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ရတာကို အလွန်ပဲ နှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်မိပါတယ်။” ဟု ပြောပါသည်။
iDiscover ရဲ့ မြို့ပတ်ရထား ခရီးစဉ်ပြ မြေပုံကို ပုံဖော် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးသူ Jackie Lynn ကလည်း အခုလို ရှင်းပြပြန်သည်။ “မြို့ပတ်လမ်းတစ်လျှောက် ဒီလို ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို လှည့်လည် ကြည့်ရှှု၊ လေ့လာရတာ ကျွန်တော့်အဖို့ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ပါပဲ။ ဒီလုပ်ငန်း ပြီးပြတ်အောင် ဆိုရာမှာ၊ နောက်ဆုံးတော့ မြို့ပတ်ရထား အကြိမ်ကြိမ်စီး၊ အဲဒီ ဝန်းကျင်တွေသွားလည်ပတ်၊ အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်လို့ ပြီးမပြီး လုပ်ရတာပါ။ ကျွန်တော် တကယ်ကြိုက်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုကတော့ မလွှကုန်းနဲ့ အဲဒီမှာရှိတဲ့ ဈေးဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေပါပဲ။ ”
“iDiscover ကို ကြည့်လိုက်ရင် သူ့မှာ အလွန်ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ အမြဲရှိနေတာပါပဲ။ ငယ်ရွယ်သူ၊ တီထွင်ဖန်တီးတတ်သူတွေကို ဆွဲဆောင်စေမယ့် ပျော်ရွှင်စရာ ပွဲတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်တာတွေ့ရတယ်။” ဟု Burma Bistro ပိုင်ရှင် Any Naing ကပြောသည်။
iDiscover Yangon ၏ ယခု မြို့ပတ်ရထား ခရီးသွားလမ်းညွှန်သည် နောက်ဆုံးထွက်ရှိ လာသည့် လမ်းညွှန်သစ်တစ်ခုပါ။ iDiscover Yangon ဆိုသည်မှာလည်း ရန်ကုန်၏ သမိုင်းကို အရှိအရှိ အတိုင်း၊ မြင်ရကြားရသည့်အတိုင်း ဖေါ်ပြထားသော ခရီးသွားလမ်းညွှန် စီးရီး ဖြစ်ပါသည်။ ထွက်ခဲ့ပြီးသမျှ လမ်းညွှန်များမှာ ပန်းဆိုးတန်း၊ တရုပ်တန်း၊ ဘင်္ဂါလီစု၊ အတွင်းဝန်ရုံးနှင့် အထူးထုတ်တစ်ခုဖြစ်သော ရန်ကုန်လမ်းညွှန်(Yangon Good Guide) တို့ဖြစ်သည်။
ယင်းကဲ့သို့သော ခရီးသွားလမ်းညွှန်များတွင် နားလည်တတ်ကျွမ်းမှုရှိရှိဖြင့် ပုံနှိပ်လမ်းညွှန်မြေပုံနှင့်အတူ သွားလိုရာကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေပေးမည့် မိုဘိုင်းဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲကိုပါ ထည့်သွင်းစီစဉ်ပေးထားသည်။ ထို့အပြင် သင်၏ လက်ဖဝါးပေါ်တွင်ပင် ကြည့်ရှှုလေ့လာနိုင်စေရန် မြို့ရှိ ထဲထဲဝင်ဝင်အကြောင်းအရာများ၊ လမ်းလျှောက် လည်ပတ်ရာတွင် တိတိပပ အထောက်အကူပေးမည့် ခရီးသွားလမ်းညွှန်များ၊ ဓာတ်ပုံပညာဖြင့် အစွမ်းပြ ရိုက်ချက်များနှင့် မြို့ဝန်းကျင် အသီးသီးကို အလွယ်တကူမြင်ယောင်၍ အကျွမ်းတဝင် ဖြစ်သွားစေမည့် နောက်ခံ ဇာတ်ကြောင်းအဖုံဖုံတို့လည်း ပါဝင်ထားသည်။
ယခုလမ်းညွှန်သစ် မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စ,တင်ဖြန့်ချိပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ Burma Bistro စားသောက်ဆိုင်၌ အောက်တိုဘာ လ (၂၁)ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)၊ ညနေပိုင်း ၂ နာရီမှ ၆ နာရီတွင်ကျင်ပမည်ဖြစ်ရာ၊ ယင်းပွဲနှင့်အတူ iDiscover နှင့် Featured Collectives တို့က ပူးပေါင်းတင်ဆက်မည့် မြို့ပတ်ရထား ဓာတ်ပုံပြပွဲလည်း ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။ ရထားလမ်းတလျှောက် လမ်းရှုခင်းများနှင့် လူပုံတူ(Portrait)ဓာတ်ပုံ ၂၀ ပံုတို့ကိုဆင်ရင်ပြသထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် Featured Collectives နှင့် IGers Myanmar တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် Instameet (Instagram သုံးလေ့ရှိသူများ အင်တာနက်ပေါ်တွင် တွေ့ဆုံ၍ ဓာတ်ပုံနှင့် အတွေ့အကြုံများ ဖယ်လှယ်ခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်စရာပွဲ) ကိုပါ ထည့်သွင်းထားသည်။ ပွဲတွင်ပါဝင်သူများက ခရီးစဉ်လမ်းပြမြေပုံနှင့် တွဲထားသော မိုဘိုင်းဖုန်းသုံး ဆော့ဖ်ဝဲ(app)ကို သုံးပြီး မြို့ပတ်ရထားလမ်းတစ်လျှောက် လူသိနည်းလွန်းသေးသော စိတ်ဝင်စားဖွယ် နေရာများကို ရိုက်ကူး၍ ၎င်းတို့၏ Instagram အကောင့်များပေါ်သို့ တင်ဆက်ကြရန်ဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင် အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးအဖွဲ့က ဖန်တီးမှု အရှိဆုံးဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သော ရိုက်ချက်များအတွက် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆုများလည်း ပေးအပ်ချီးမြှင့် သွားမည်။
ပွဲအသီးသီး၏ အသေးစိပ်အကြောင်းအရာများကို Facebook Event Page. https://www.facebook.com/events/330288437729106/ တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
RSVP for the launch party at projects@urbandiscovery.asia. ယင်းခရီးသွားလမ်းညွှန် စတင်ဖြန့်ချိပွဲ ပါတီသို့ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အကြောင်းကြားဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာမှာ projects@urbandiscovery.asia ဖြစ်သည်။
iDiscover ၏ ရှေ့လာမည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်မှာ ပန်းချီ လမ်းညွှန်လက်စွဲ ဖြစ်သည်။ စီစဉ် လုပ်ဆောင်ဆဲပါ။ ရန်ကုန်ရှိ ပန်းချီပြခန်းအားလုံးနှင့် ပန်းချီကားများကို ဖန်တီးရာ နေရာများကို လမ်းညွှန်ဖော်ပြထားမည်လည်းဖြစ်ပါသည်။
Win Kyaw-Oo2018-10-21 11:53:16
Insein Prison Prison notorious for its inhumane conditions and torture tactics has been used to hold Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi.